TOP 6 ghế massage Xiaomi bán chạy nhất hiện nay 2022 | Muasalebang - Muasalebang
TOP 6 ghế massage Xiaomi bán chạy nhất hiện nay 2022 | Muasalebang
Đang Đọc: TOP 6 ghế massage Xiaomi bán chạy nhất hiện nay 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Uma sicabanga nge-Xiaomi, sivame ukucabanga ngenye yezinkampani ezinkulu zama-smartphone emhlabeni. Ungase ungazi, lo mkhiqizo udume futhi ngemigqa yomkhiqizo we-Mijia, kuhlanganise Isihlalo sokubhucunga i-Xiaomi Ukukhiqiza ngokubambisana nenkampani ye-Momoda.
1 Sethula uhlobo lwe-Xiaomi massage chair
2 Izihlalo ezi-6 ezithengiswa kakhulu ze-Xiaomi zokubhucunga
2.1 Isihlalo se-Xiaomi Momoda SX532 sokubhucunga umzimba ogcwele
2.1.2 #Izici ezibalulekile
2.2 Isihlalo se-Xiaomi Momoda Smart Leisure massage RT5850s
2.2.2 #Izici ezibalulekile
2.3 Isihlalo sokubhucunga i-Xiaomi AI mini Momoda RT5728
2.3.2 #Izici ezibalulekile
2.4 Isihlalo esihlakaniphile se-Xiaomi AI Leravan MS-300
2.4.2 #Izici ezibalulekile
2.5 Xiaomi Momoda Smart AI massage chair RT5863
2.5.2 #Izici ezibalulekile
2.6 Xiaomi Momoda Smart AI massage chair RT5870 / RT5871
2.6.2 #Izici ezibalulekile
Sethula uhlobo lwe-Xiaomi massage chair
UXiaomi waqala njengenkampani yokuthuthukisa isoftware, wabe esengena emkhakheni wokwenza amafoni. Phakathi neminyaka engu-5 kuphela yokuthuthukiswa, lolu hlobo lukhuphukele kuNombolo 1 e-China futhi lwafinyelela ku-Top 5 emhlabeni. (ngokombiko we-IDC). Kuze kube manje, i-Xiaomi ibilokhu ihlanganisa umhlaba wonke, izinga lokuthengiswa kwefoni lilinganiselwa ukuthi likhuphuke ngo-30% ngonyaka.
Ingabe isihlalo sokubhucunga i-Xiaomi sihle?
Akagcinanga nje ngokuma engxenyeni yezogesi, i-Xiaomi iphinde yethula uhlobo lwedivayisi ku-ecosystem yayo, iMijia. Bekunemikhiqizo eminingi emisha eyethulwe kulo mcimbi; okuhlanganisa uhlobo lwesihlalo sokubhucunga se-Momoda, eyethulwa okokuqala yi-Xiaomi ngo-2017 ngentengo yama-yuan angu-3999. (cishe 13.3 million VND).
Kusukela ngo-2017 kuze kube manje, i-Xiaomi iyaqhubeka nokusebenzisana nomkhiqizo we-Momoda ukwethula imigqa eminingi isihlalo esigcwele sokubhucunga umzimba okusha. Uma kuqhathaniswa nesizukulwane sokuqala, isizukulwane esilandelayo sezihlalo zokuphumuza amamasaji sinokuthuthuka okumangazayo, ikakhulukazi ukuhlanganiswa kobuhlakani bokwenziwa be-AI, abasebenzisi bangakwazi ukulawula besebenzisa isilawuli sezwi ngomsizi. XiaoAI.
Ingabe isihlalo sokubhucunga i-Xiaomi sihle? Kuya Izici ze-massage chair Imvamisa, izihlalo zokubhucunga ze-Xiaomi ziphendula kahle kakhulu. Ngokuqondene nezici ezisezingeni eliphezulu, inkampani ayinayo imikhiqizo evelele, kodwa imikhiqizo yesitulo sokubhucunga i-Xiaomi iyathengeka kakhulu kuneminye imikhiqizo esezingeni eliphezulu njenge: Isihlalo se-massage se-Fujikashi, Isihlalo sokubhucunga se-Okia, Isihlalo se-Ogawa massage, shika massage chair.
Izihlalo ezi-6 ezithengiswa kakhulu ze-Xiaomi zokubhucunga
Ukuba nenkundla enkulu yomhlaba wonke ye-IoT yedivayisi ehlakaniphile, akunzima ku-Xiaomi ukwenza umugqa massage isitulo yesimanje enezici ezivelele ezingenziwa kalula yinoma yimuphi umkhiqizo. Lapho, izihlalo ezi-6 eziphezulu zokubhucunga ezingezansi ziyimikhiqizo evelele kakhulu.
Isihlalo se-Xiaomi Momoda SX532 sokubhucunga umzimba ogcwele
Amandla alinganiselwe: 60W
I-voltage elinganiselwe: 220V
Imvamisa elinganiselwe: 50Hz
Isisindo Net: 42kg
Usayizi womkhiqizo: 1250 x 630 x 980mm
Inani: 19 million VND
Xem Thêm Đồng hồ Xiaomi Haylou LS02 | Muasalebang
Ifakwe indlela yokubhucunga ebanzi: Uhlaka lokubhucunga lwesihlalo sokubhucunga i-Xiaomi Momoda SX532 luhlanganisa izindlela zokubhucunga ezi-3 ezithinta izikhundla ezibalulekile njengamahlombe, iqolo nokhalo, okuthinta ngokunembile indawo ngayinye yobuhlungu.
Isihlalo siphinde sibe namasondo angu-6 okubhucunga; indlela edidiyelwe ye-3D yokubhucunga inweba izinhlangothi ezintathu phezulu, phansi, kwesokudla, kwesokunxele, ngaphambili nangemuva … Imilenze inama-airbag angu-12, ibhande lesihlalo lihlanganisa amamojula angu-2 okushisa asheshayo, akhulise ukujikeleza kwegazi ngokuphumelelayo, ekhulula ukungezwani ngokuqondile.
Ubuchwepheshe be-Zero-gravity: Isihlalo sokubhucunga i-Xiaomi Momoda SX532 sihlanganiswe nesimo sokusebenza se-zero-gravity esisabalalisa isisindo somzimba ngokulinganayo, sinciphise ukucindezeleka emgogodleni nasemalungeni. Kulula ukusebenzisa, okokusebenza okuphefumulayo: Umkhiqizo unephaneli yokulawula endaweni yokuphumula yengalo, vele ubuke bese ucindezela ukuze usebenzise isitulo. Isihlalo siklanywe ngokuhlangene, simbozwe ngesikhumba esithambile se-PU, esikhumbeni, kulula ukusihlanza futhi sinenhlanzeko.
Isihlalo se-Xiaomi Momoda Smart Leisure massage RT5850s
Amandla alinganiselwe: 100W
Material: Isikhumba se-polyurethane
Ubukhulu: 130 x 68 x 112cm
Intengo: 20 million VND
Izinga eliphakeme lokuzenzakalelayo: Isihlalo sokubhucunga i-Xiaomi Momoda Smart Leisure RT5850s ​​sivumela abasebenzisi ukuthi benze izivivinyo eziningi ukusuka emnene kuye kochwepheshe, kusukela entanyeni kuye ozwaneni, kungalungisa ukuqina kanye ne-engeli yokuzivocavoca uma kudingeka. Uma uqhuba massage yokuphumula, ama-massage amabhola ngaphansi kwesihlalo acushiwe, ama-massaging ngokulinganayo kusukela entanyeni kuya ezinyaweni ukuze abe nomuzwa obushelelezi futhi ukhululekile.
Ukonga amandla: Umkhiqizo udla kuphela amandla angu-100W kumodi yokulinda, udla u-0.5W ngehora. Hhayi nje ukonga amandla, i-Xiaomi Momoda Smart Leisure RT5850s ​​​​futhi inomsindo ophansi kakhulu, i-55dB kuphela, iqinisekisa ukuthi akukho msindo, okuthinta abantu abaseduze.
Ukuxhumeka kwe-inthanethi kwe-smartphone: I-Xiaomi Momoda Smart Leisure RT5850s ​​ingaxhunywa ngokuqondile kuma-smartphone ngohlelo lokusebenza oluzinikele lwe-Mijia. Ngayo, umsebenzisi angakwazi ukusebenza ngokugcwele kuyo yonke imisebenzi yokulawula, kusukela kumodi emshinini, isivinini, ukuqina kokubhucunga esihlalweni, okwesimanje kakhulu futhi kulula.
I-Xiaomi Momoda Smart Leisure RT5850s
Isihlalo sokubhucunga i-Xiaomi AI mini Momoda RT5728
Amandla kagesi: 220V ~
Isisindo Net: 45kg
Usayizi womkhiqizo: 1030 x 620 x 920mm
Izindlela ezine zokubhucunga ezihlakaniphile, ezibanzi: Akukona nje okuvelele ngedizayini yayo encane futhi elula, isihlalo somasaji se-Momoda RT5728 mini AI siphinde sithandwa izindlela eziningi zokubhucunga ezihlakaniphile. Kubandakanya 3 izindlela zakudala zokubhucunga (umzimba ogcwele, ihlombe nentamo massage kanye nokunyakazisa unyawo). Ungenza ngendlela oyifisayo imodi yokusikhipha umzimba bese uhlehlisa i-engeli ngokwezidingo zakho.
Xem Thêm Tất tần tật những tính năng mới trên MIUI 11 của Xiaomi | Muasalebang
I-Smart massage technology: Umkhiqizo ufakwe isitimela esinyakazayo se-3D esihlakaniphile. Kuhlanganiswe nomklamo wangemuva wesihlalo esimise okuka-S (ofanele ijika elingemuva lomzimba) kanye nomklamo omise okuka-L okhalweni nasezinkalweni, kusiza ukwandisa indawo yokubhucungwa komzimba ogcwele, ukumboza zonke izikhundla kusukela entanyeni. ematholeni..
Imodi ye-Zero gravity: I-AI mini i-Momoda RT 5728 inikeza abasebenzisi isipiliyoni se-zero-gravity ngenxa yokulungiswa kwayo okugcwele komzimba nge-engeli engu-105 ° +18 °, ukunciphisa ingcindezi emgogodleni nasemalungeni, okusiza ukwandisa ukunethezeka, ukuphumula. Ngaphezu kwalokho, i-AI ​​massager iphinde isekele imodi yokumasaji yokudlidliza kwezinyawo, esiza ukushisa ama-calories namathole amancane.
Izindlela ezintathu ezilula zokulawula, kulula ukusebenza: I-AI mini Momoda RT5728 ifakwe izindlela zokulawula ezi-3, ikwenze kube lula ukuyisebenzisa ezimeni ezahlukene. Ungakwazi ukulawula isihlalo ngezwi ngesipika se-AI, usilawule nge-smartphone yakho ngemva kokufaka i-App noma usilawule ngenkinobho yephaneli yokulawula engalweni yesihlalo.
Isihlalo esihlakaniphile se-Xiaomi AI Leravan MS-300
Amandla alinganiselwe: 50W
I-voltage elinganiselwe: 220V ~ 50Hz
Isikhathi sokusebenza: imizuzu eyi-15
Izinga lomsindo: <=54dB
Ubukhulu obuqondile: 104 x 66 x 103cm
Inani: 18 million VND
Isistimu ye-massage yamaphoyinti amaningi: Isihlalo sokubhucunga sika-Xiaomi Momoda sika-Xiaomi Momoda sika-Leravan MS-300 sifakwe isistimu yokubhucunga enamaphuzu amaningi, ilingisa umnyakazo wokubhucunga ochwepheshe okungu-6 ezindaweni ezibalulekile ezifana: okhalweni, intamo, okhalo… ukunikeza abasebenzisi umuzwa onethezekile. Okuhlangenwe nakho okuphelele ekhaya . Ngaphandle kwalokho, isihlalo siphinde sibe nohlelo lwe-roller oluchaza ukunyakaza kwama-massage ukusiza ukujikeleza kwegazi.
I-Zero gravity massage: Ukulingiswa kweZero-gravity okuvela kubuchwepheshe be-NASA kusiza ukwehlisa ingcindezi kumalunga nomgogodla, ngomuzwa okhululeke kakhulu ngokomzimba nangokwengqondo. Isakhiwo sohlaka lwesitulo esimise okuka-S kanye no-L sinikeza abasebenzisi ukuguquguquka okwengeziwe ekushintsheni ukusuka kolunye uhlangothi kuya kolunye, izindawo zokuhlala kanye nokulala.
Ukulawula izwi: Ngohlelo Lokusebenza olufakwe ku-smartphone, abasebenzisi bangalawula futhi baqaphe izici zesihlalo sokubhucunga i-Leravan MS-300. Ngaphezu kwalokho, i-Xiaomi iphinde yakha iphaneli yokulawula ngqo engalweni yesihlalo, yonke imisebenzi ilula ngezinkinobho zokucindezela.
👉 Bona okwengeziwe ukuze uthole imininingwane mayelana: ezishibhile massage izihlalo
Xiaomi Momoda Smart AI massage chair RT5863
Amandla kagesi: 220V
Imvamisa: 50 Hz
Isisindo Net: 99.8kg
Ubukhulu: 1525 x 718 x 1150mm
Inani: 40 million VND
Isakhiwo sesayensi, ukuma okukhululekile kwe-massage: I-AI smart massage chair RT5863 ifakwe i-super 3-core configuration, ubuchwepheshe bokubona indawo yehlombe elihlakaniphile le-optpler kanye nethrekhi yomgogodla engu-125cm 3D ukusiza ukunquma indawo okuyiyonayona, ukulungisa usayizi womzimba womsebenzisi ofanelekayo. Ezinqulwini, i-Xiaomi Momoda iphinde ibe ne-thermal graphene coating evala yonke indawo okhalo futhi ifudumale ifike ku-45 degrees Celsius.
Xem Thêm Đồng hồ Xiaomi Haylou LS05 | Muasalebang
Ifakwe ama-airbag angama-36 anezindlela ezintathu: Ama-airbag angu-36 angu-3 asakazeka ngokulinganayo phezu kwesihlalo sonke, kusukela entanyeni, emahlombe kuya ematheni ezinyawo, kubhucungwa zonke izindawo emzimbeni. Ukunyakaza kwe-massage okuguquguqukayo kusiza ukukhulula ukukhathala ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, isihlalo sibuye sifakwe isimo sokusebenza esingacindezelwe esingaba ngu-126 degrees, esiza ukunciphisa ukucindezeleka emgogodleni nangemuva, sinikeze umuzwa wokuphumula, njengokukhanya njengokuntanta emoyeni.
I-3D yesimanje ye-bionic massage ehlakaniphile: Ngaphezu kwalesi sici sokumasaji esihlakaniphile, isihlalo sokubhucunga se-Smart AI i-RT5863 siphinde sifakwe izivivinyo ze-massage zasendulo ezingu-6 zengxenye ngayinye yomzimba njengentamo, ihlombe, iqolo, umlenze… Izinhlelo zokubhucunga ezi-3 ezinikelwe iqembu ngalinye labantu: abesifazane , amadoda nabadala; ukuhlangabezana nezidingo zeminyaka kanye nesimo somzimba, ukunyakaza kulungile ngokobuchwepheshe, kusiza ukukhulula ingcindezi ngokushesha.
Imodi yokulawula, uxhumano lohlelo lokusebenza oluhlakaniphile: Isihlalo sokubhucunga se-Momoda RT5863 sifakwe isici sokuxhuma nge-Bluetooth, sinezipikha ezi-2 zokulalela umculo; Vumelanisa ne-Smart App, usize ukulawula yonke imisebenzi nge-smartphone, ngezwi elinesipikha se-xiaomi AI, isilawuli kude isikrini esikhulu ukude, imingcele iboniswa ngendlela enembile, kulula ukuyisebenzisa.
Xiaomi Momoda Smart AI massage chair RT5870 / RT5871
Amandla kagesi: 220 ~
Isisindo Net: 88.7kg
Usayizi womkhiqizo: 1460 x 700 x 1150mm
Inani: 35 million VND
Ubuchwepheshe obuhlakaniphile, ukwakheka kwesayensi: Ngokubhekiselwa ebuhleni besihlalo sokubhucunga i-Momoda RT5870 / RT5871 AI, akunakwenzeka kungasaphathwa ubuchwepheshe bokutholwa kwehlombe. Ingakwazi ukulandelela isikhundla sehlombe lomsebenzisi, ibone indawo efanele yokubhucunga umzimba ngamunye; I-massage ngesu elifanele, indawo elungile yomphumela omuhle wokubhucunga.
Ngaphandle kwalokho, isihlalo sokubhucunga se-AI Momoda RT5870 / RT5871 siphinde sifakwe izindlela ezi-2 zero-gravity, ukulungisa imilenze ibe yizifunda ezimbili, okuhlanganisa: 126 ° +7 ° nesimo esijulile, ukunciphisa ingcindezi kumalunga namakholomu aphilayo. Isitimela esinyakazayo esingu-125cm ubude bohlobo lwe-3D S + L sihambisana nejika lomzimba, sandise indawo yokubhucungwa.
Imishini ye-massage yemvelo, eguquguqukayo: I-AI Momoda RT5870 / RT5871 ihlanganiswe nezindlela zokubhucunga eziyisi-6, imodi ngayinye inikeza okuhlangenwe nakho okuhlukile, okulungele isimo somzimba somuntu ngamunye. Ungashintsha ukunyakaza ngokucindezela inkinobho. Ama-airbag angu-30 anendlela engu-3 asatshalaliswa ngokulinganayo ezingxenyeni zomzimba. Ubuchwepheshe bokushisisa be-graphene obuthuthukisiwe okhalweni obabantu abadinga ukufudumala noma abahlushwa izinhlungu zamalunga unyaka wonke.
Ukulawula okuhlakaniphile nokuxhumana: Isihlalo sokubhucunga i-Momoda RT5870 / RT5871 AI sinezindlela zokulawula eziguquguqukayo ezingu-3, ​​okuhlanganisa: Isilawuli kude ngesikrini esikhulu esinembile; Ukulawula izwi ngesipika esihlakaniphile se-AI nokulawula nge-smartphone ngezilungiselelo zohlelo lokusebenza.
Ngenxa yokuba nesisekelo esiqinile sobuchwepheshe, esinezinto zesimanje nezihlakaniphe kakhulu massage isitulo Xiaomi Momoda Ziningi izinzuzo ezivelele uma ziqhathaniswa nezinye izinhlobo zezihlalo zokubhucunga emakethe. Ikakhulukazi massage isitulo Xiaomi Momode inenani elihle kakhulu, ukusuka emashumini kuye ezigidini zama-dong kuphela, esigabeni esimaphakathi nebanga.
Ngenhla ngu”Izihlalo ezi-6 ezihamba phambili zokubhucunga ze-Xiaomi”, lapho imikhiqizo i-SX532, i-Smart Leisure RT5850s, i-AI mini Momoda RT5728 ne-AI Leravan MS-300 inamanani athambile nezici ezihlukahlukene, ngakho-ke aziwa kakhulu emakethe yesifunda. Uma ufuna ukubona imikhiqizo yezihlalo zokubhucunga, ama-treadmill, amabhayisikili okuzivocavoca neminye imishini yezemidlalo yezempilo, ungavakashela igumbi lethu lokubonisa. Isitolo semishini yezemidlalo yeTechfitness ukuzwa kanye nokuthola izimpendulo zemibuzo ethile ehlobene nemishini yezemidlalo eshisa izikhotha emakethe muva nje.
Top 20 game đối kháng hay nhất trên điện thoại và máy tính | Muasalebang
Máy giặt Samsung Inverter 9 kg WW90T3040WW/SV | Muasalebang